Mukombe wechokoreti, kirimu uye nzungu | Bezzia
Mukombe wechokoreti, kirimu nenzungu
Maria vazquez | 08/06/2021 10:00 | Desserts
Kana ndikakuudza kuti unogona kugadzira dhizeti iyi mumaminitsi gumi, ungazvitenda here? Mukombe uyu wechokoreti, kirimu nenzungu iri imwe nzira huru kana tine vaenzi kumba. Tinogona kusiya chokoreti chigadziko chakagadzirwa uye kuwedzera tisati tashandira zvimwe zvese zvigadzirwa.
Zvingada marii iwe kugadzirira aya magirazi? Inenge maminitsi gumi. Ipapo, iwe unofanirwa kungovarega iwo atonhorere kukamuri tembiricha kana vachengete mufiriji kana usiri kuzozvidya musi iwoyo iwoyo. Chocolate mousse Iyo yakapfava uye inogona kupihwa yega, asi kirimu nenzungu zvinobatsira mukuita kuti dhizeti iyi itenderere.
Chinhu chinonakidza chekuwedzera nzungu mune ino dhizeti ndiyo munyu musiyano kuti izvi zvinopa kune dhizeti. Uye iyo inobata bata mune iyo nzungu yakakangwa iyo inoshandiswa semisoro. Asi kana nzungu isiri yako chinhu, inzwa wakasununguka kuwedzera mashoma shavings echokoreti, cocoa kana sinamoni pamusoro pekirimu.
1 Zvisungo zvegirazi rimwe
Zvisungo zvegirazi rimwe
200 ml yemukaka kana almond chinwiwa
9 g. chibage
1 supuni shuga
10 g. cocoa yakachena
Isa zvinhu zvina zvekutanga mundiro: almond chinwiwa, chibage, shuga uye cocoa. Ipapo, sangana nemamwe matanda echinyorwa kusvikira zvese zvinoshandiswa zvanyatso sanganiswa.
Tora ndiro kune microwave uye inopisa kweminiti pasimba remagetsi. Wobva wabvisa uye unomutsa netsvimbo usati waidzorera mu microwave. Dzokorora kuvhiya kakawanda sezvazvinodiwa ikozvino nekurova kwemasekondi makumi matatu kusvikira musanganiswa wakora Mune yangu yaive maminitsi mana muhuwandu.
Pane imwe nguva ndakakora dururira musanganiswa mugirazi uye rega kutonhorera kutonhorera.
Apo cocoa mousse inotonhora, shongedza nekwapurwa kirimu tambo shomanana dzenzungu ruomba, sinamoni nenzungu dzakakangwa.
Nakidzwa negirazi rechokoreti, kirimu nenzungu dzedhiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Desserts » Mukombe wechokoreti, kirimu nenzungu
5 manomano ekuwedzera kuchengetedza mukicheni diki
Zvekuita kana mumwe wacho achinyepa